The Irrawaddy's Blog: ရွှေရေးထင်ထင်ရဲ့ သရော်စာ
ဓာတ်ပုံ - shweyay htin htin facebook
မကြာသေးခင်က ဖေ့ဘုတ် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်မှာ ခန္တာကိုယ်အချိုးအစား ခပ်လန်းလန်း နာမည်ကလည်း ခပ်မိုက်မိုက် နဲ့ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာမတဦး တဟုန်ထိုး လူသိများလာတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ သူကတော့ ရွှေရေးထင်ထင် ဆိုသူပါ။ ခပ်လန်းလန်း ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာတောင် သူငယ်ချင်းအဖြစ်လာအပ်သူတွေ follow လုပ်သူတွေ နေ့ချင်းညချင်း များပြားလာတယ်လို့ သူ့ကိုယ်ပိုင် ဖေ့ဘုတ်မှာရေးသားထားပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီထဲကမှ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၂ ရက်နေ့က သူ့ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာထက်မှာ သရော်စာလေးတစောင် ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီသရော်စာလေးကတော့ လတ်တလော ဖေ့ဘုတ်လူမှုကွန်ရက် မှာရော အပြင်လောကမှာပါ ဟိုးလေးတကျော်ကျော်ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်လေးတွေကို သရော်စာလိုရေး သားထားတာပါ။
“ပြောချင်တာကတော့ ကျမက လတ်တလော up to date ဖြစ်နေတဲ့ current ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို ဟာသအနေနဲ့ ရေးထားတဲ့သဘောပါပဲ။ တခြား ဘာကိစ္စ အကြောင်းတရားမှ မပါဝင်ပါဘူး။ ဖေ့ဘုတ်ပရိတ်သတ်တွေကို ပြောချင်တဲ့၊ ပျော်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ရေးထားတာပါ။” လို့လည်း စာရေးဆရာမ ရွှေရေးထင်ထင်က ဧရာဝတီကိုပြောပါတယ်။
သူ့ရဲ့ သရော်စာလေးကို ဧရာဝတီပရိတ်သတ်တွေ ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။
"ရွှေရေးထင်ထင်၏ မဟာ့…မဟာ ဂန္တ၀င် အိပ်မက်ရှည်ကြီး "
" အပိုင်း ၂ "
အကျွန်ုပ် ရွှေရေးထင်ထင် သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်က သူငယ်ချင်းများစွာပါဝင်သည့် အိပ်မက်ရှည်ကြီး အား မြင်မက်ခဲ့ပြီးနောက် ……………… ထိုကဲ့သို့ မမြင်မက်တော့သည်မှာ ကာလ အတန်ကြာပင် ရှိခဲ့လေပြီ။
တစ်နေ့သော်…………. အကျွန်ုပ်သည် FB ထဲတွင် " ကျွန်မက နှင်းဆီပါ မောင် " ဟူသော စကားအားပြက်ရယ်ပြုခြင်း ၊ ၅ % အခွန်ကိစ္စ အားဝိုင်းဝန်းရှုံ့ချခြင်း ၊ လတ်တလော ရေပန်းစားကာ ၀န်းရံခံနေရသော FB ဆယ်လီများ သတင်း…….. အစရှိသော Post များအား ဖတ်နေချိန်တွင် သူငယ်ချင်း ၁ ဦးက Screen Shot ရိုက်ထားသော ပုံတစ်ပုံအား ပေးပို့လာလေတော့သည်။
ထိတ်လန့်ဖို့ ကောင်းလှလေစွ။ အကျွန်ုပ်အား ၀န်းရံဖို့စီစဉ်နေကြသည် ဆိုပါတကား။ အလွန်တုံးအ လှသော အကျွန်ုပ်သည် ဤရက်ပိုင်း Friend Request များလာခြင်း ၊ Follower များလာခြင်း ၊ Chat Box ထဲတွင် ပေးပို့ သော စာတွေ မတရားများလာခြင်းကြောင့် ဖွင့်ဖတ်မရအောင်ဖြစ်လာခြင်း………တို့ သည် ၀န်းရံခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယခုမှပင်ရိပ်စားမိတော့၏။
ထိုကြောင့်……… ထိုနေ့ ည၌ ထိတ်လန့် ခြင်းကြီးစွာဖြင့် အိပ်ယာဝင်ရလေရာ အလွန်ထူးဆန်းသော အိပ်မက်အား မြင်မက်လေမိတော့၏။ ထိုအိပ်မက်သည်ကား………………………………………………..
အကျွန်ုပ်သည် ၀တ္တုရှည်ကြီး တစ်ပုဒ်အား ရေးသားရန် အလို့ငှာ ဇာတ်ကွက် စဉ်းစားနေစဉ် ၀ုန်းခနဲ အိမ်တံခါးပွင့်လာ၏။ ၀င်လာကြသည်က အနောက်တိုင်း အနက်ရောင် Suit များ ကျနစွာ ၀တ်ဆင်ထားပြီးနေကာမျက်မှန် အနက်များတပ်ဆင်ထားသော လူ ၃ ယောက် ……… ။ ထိုသူတို့၏ ခက်ထန်မာကြော တိကျပြတ်သားလှသော အသွင်သဏ္ဍာန်သည် အနောက်တိုင်း ရုပ်ရှင်ကားများထဲမှ FBI , CIA တို့နှင့် အလားတူလှပေစွ။ ထိုသူတို့က အကျွန်ုပ်အား ချိုင်းမှ တဖက်တချက် မကာ အိမ် ထဲမှ ဆွဲထုတ်လေတော့သည်။
အကျွန်ုပ်လည်း ကြောက်လန့်တကြီးဖြင့် အကျိုးအကြောင်းမေးရာ " တိတ်စမ်း !!! ရုံးရောက်ရင် အားလုံးသိရမယ် " ဟု မာန်မဲလေတော့သည်။ ထိုလူများသည် ကျွန်ုပ်အား BMW ကားတစ်စီးထဲသို့အတင်းအကြပ် တင်လိုက်ကြပေ၏။
ကားထဲရောက်မှ ပို၍ အံ့သြရပေတကား။ ကားထဲတွင် လတ်တလောရေပန်းစား နာမည်ကြီးနေသော FB ဆယ်လီကြီး Thakhin Pilotcaptdaonenine ရှိနေလေသည်။ ထို Pilot ဆယ်လီကြီးက
"ညီမလေး ဘာမှ မလန့် နဲ့ ……ဆွေးနွေးစရာရှိလို့အကိုတို့ ကို သူတို့ ဆရာက အခေါ်လွှတ်လိုက်တာ "……ဟု အားပေးစကား ပြောရှာသည်။ ထိုသို့ ရှင်းပြနေဆဲ တခဏအတွင်း မောင်းနေသော ကားက တုံ့ခနဲ့ ရပ်သွားကာ ကျွန်ုပ်တို့ ကို ဆင်းခိုင်းလေတော့သည်။
ဒုတိယအကြိမ်…… Oh My God
ကျွန်ုပ်တို့ ရောက်နေသည်မှာ လွန်စွာလှပတင့်တယ်၍ တိမ်မြူတိမ်စိုင်တွေကြား၌ တည်ရှိသော နတ်ပြည် ဖြစ်နေလေတော့သတည်း။ ရွှေရောင်တ၀င်းဝင်းနှင့် လွန်စွာလှပသော တန်ဆောင်ကြီး တစ်ခု ရှေ့၌လည်း လူသူအများစုရုံးနေကြ၏။
ကျွန်ုပ် က သိ၍ ကျွန်ုပ် ကိုလည်းသိသော...
ကျွန်ုပ် က သိ၍ ကျွန်ုပ် ကို မသိကြသော...
ကျွန်ုပ် က မသိသော်လည်း ကျွန်ုပ် ကို သိကြသော...
FB မှ လူများစွာ ပါရှိကြကုန်၏။ အံ့သြတကြီး နှင့် ငေးမောနေစဉ်… လက်မောင်း၌တာဝန်ဆိုသော စာလုံးကို အနီပတ် ပတ်ထားသော နတ်သား တစ်အုပ်ထွက်လာကာ ကျွန်ုပ် နှင့် Pilot ဆယ်လီကြီး အား ဆွဲခေါ်လေတော့သည်။
( လှည်းတန်း မှာ မဟုတ်ပဲ နတ်ပြည် ဖြစ်လို့သာ တော်သေးပေစွ )
" လာ….လာ… မင်းတို့၂ ယောက် ပဲ နောက်ဆုံးကျန်လို့စောင့်နေတာ.."
တန်ဆောင်းထဲ ၀င်လာကြရာ ဆိုင်းဘုတ်များ ထောင်၍ နေရာများ ကန့်သတ်ထားခြင်းအား တွေ့ ရ၏။
သိကြားမင်း ဦးဆောင်သော တရားသူကြီးအဖွဲ့ 
FB တွင် ၀န်းရံခံရသော ဆယ်လီများအဖွဲ့ 
ဆယ်လီများအား ၀န်းရံကြသူများ အဖွဲ့ 
ဟူ၍ အမျိုးမျိုးရှိကြကာ ဘယ်အုပ်စုထဲ ၀င်ရပ်ရမည်နည်းဟု စဉ်းစားနေဆဲတွင် တာဝန် အနီပတ်နှင့် နတ်သားတို့က FB တွင် ၀န်းရံခံရသော ဆယ်လီများ အဖွဲ့ထဲသို့တွန်းထိုး ထည့်သွင်း လိုက်လေတော့၏။
ထိုအဖွဲ့ ထဲတွင် ….. နာမည်ကြီး ဒါရိုက်တာများ ၊ မင်းသားများ ၊ မင်းသမီးများ ၊ အဆိုတော်များ ၊ မော်ဒယ်များ ၊ စာရေးဆရာများ ၊ Sexy ဓါတ်ပုံများဖြင့် နာမည်ကြီးသူများ ၊ အလှပဂေး Lady Boy များ ၊ ဆရာဝန်များ ၊ Pilot များစွာရှိနေကြလေသည်။ ထိုသူများကြားဝယ်…… စာရေးဆရာယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင် အကျွန်ုပ်မှာ အသာလေး ခပ်ကုပ်ကုပ် နှင့် ရပ်နေရလေတော့၏။
"ကျုပ်က သိကြားမင်း အိမ်တော် ရဲ့ ပြောရေးဆိ်ုခွင့် ရှိသူပါ ….. အားလုံး စုံညီ စည်းဝေးရတာကတော့ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေးများ အပေါ် ၅ % အခွန်ကောက်ဖို့ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လို့ပါ…ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေက ဒီအခွန်ကို ပြည်သူတွေက ပေးဆောင်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်….ဒီအခါ ပြည်သူတွေက မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး သိကြားမင်းဆီ တိုင်တန်းလာပါတယ်…ဖုန်းငွေဖြည့်ရခြင်း ရဲ့၇၀%သော အကြောင်းရင်းက FB သုံးကြလို့ ပါတဲ့…ဒီတော့ FB သုံးသူများပဲ အခွန်ဆောင် သင့်ပါတယ်…ပုံမှန် ဖုန်းသုံးစွဲခြင်းအတွက် အခွန်မဆောင်သင့်ဘူးလို့ငြင်းကြတယ် "
ဤ စကားကြားတော့ FB ပရိတ်သတ်က ပွက်လောညံကုန်သည်။ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကလည်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နတ်သားကြီး နှင့် ပွဲတက်ပရိတ်သတ်အပေါင်းကို ဓါတ်ပုံတွေ တဖျပ်ဖျပ် ရိုက်သူ ရိုက် ၊ နတ်သားကြီး ထံ recorder လေး ထိုးပေးသူပေး နှင့် အလုပ်ရှုပ်နေ၏။
သတင်းထောက်များအား ကြည့်လိုက်ရာ …..
တတိယအကြိမ်…… Oh My God
ကျွန်ုပ် Fri List ထဲရှိသူများတွေပါလား။ ကင်မရာ မီးရောင်တွေကြားမှ နတ်သားကြီးက ဟန်ပါပါ နှင့် ဆက်ပြော၏။
" FB သုံးသူတွေကို ဆန်းစစ်လိုက်တော့ ၃၀% က သတင်း၊အတင်း၊ပညာ၊လူမှုဆက်ဆံရေး အနေနဲ့သုံးတာ ဖြစ်ပြီး ၇၀%ကတော့ ၀န်းရံခံရသူ ဆယ်လီ နဲ့ဝန်းရံသူပရိတ်သတ် အုပ်စု ဖြစ်နေပါတယ် …ဒီတော့ အခွန်ကို ၀န်းရံသူပရိတ်သတ်ကပဲ တာဝန်ယူဆောင်ပေးဖို့ရာ သင့်တော်ပါတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ နဲ့ပြည်သူတွေက ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် "
ထိုအခါတွင် ၀န်းရံသူ ပရိတ်သတ်က ဒေါသတကြီး …… တစ်ယောက်တစ်ခွန်း ထအော် လေတော့သည်။
"ကျုပ်တို့ က ၀န်းရံပေးရတယ် ဆိုတာ လွယ်တာ မှတ်လို့… လိုင်းမကောင်းတဲ့ ကြားက ဆယ်လီတွေ နဲ့ ဆယ်လီဖြစ်လာလတ္တံ့ သူတွေ ရဲ့ ပုံတွေ ရှာဖွေ Post တင်…သူတို့ တွေရဲ့ Acc ကို စုံစမ်း လာသူတွေ ကို လမ်းညွှန်ပေးရသေး… Page တွေမှာ ပုံတွေ ရောက်သွားအောင်လည်း ဖြန့်ပေးရသေး…… အိုး…… လုပ်ပေးရတာတွေ နည်းသလား …… အဲဒါတွေ အားလုံးက အလကား လုပ်ရတာမှ မဟုတ်တာ… MB နဲ့ အမျှ Bill က ကုန်သေး "
" ဟုတ်ပါ့ဗျာ…… ကျုပ်တို့ ဝန်းရံ မှ သူတို့ က ဆယ်လီ ဖြစ်လာမှာ… ကျုပ်တို့ ချီးကျုးပြီး comment ပေးမှ သူတို့ဆယ်လီ ဖြစ်တာ…အမှန်ဆို ကျုပ်တို့ က ဆယ်လီတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးနေတဲ့သူ… ဒီတော့ အခွန်တော့ ကျုပ်တို့မဆောင်နိုင်ဘူး "
" အေးဗျ…..ဖြစ်သင့်တာက အခုလို FB မှာ ကျုပ်တို့အချိန်ဖြုန်းပြီး ကြည့်စရာ ပုံတွေတင်တဲ့ သူတွေကိုပဲ အခွန်ကောက်သင့်တာ…အဓိက က ဆယ်လီတွေပဲ "
ဟိုက်…ရှားပါး….လိုရင်း က ဒီလိုကိုး ။ အခွန်အတွက် အစိုးရက ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ ကို လက်ညှိုးထိုး… ကုမ္ပဏီတွေက ပြည်သူတွေကို လက်ညှိုးထိုး……ပြည်သူတွေက FB သမားတွေကို လက်ညှိုးထိုး…… ထိုထဲကမှ ဆယ်လီတွေကိုပဲ ကွက်ကွက်လေး ရွေးချယ်…… အခွန်ဆောင် ဖို့ဖိအားပေး……
ဘုရား…ဘုရား… ရှိစုမဲ့စု ပုံလေးတွေထဲက လူ့ သဘာဝ ပီပီ လှတာလေးရွေးပြီး FB တင်မိတာ အခွန်တာဝန်သည် အကျွန်ုပ်တို့ လူနည်းစု ဖက်လှည့်လာပါရော့လား။ ၁ ဦးကို ၅% နှုန်း….. လူသန်း ၆၀ ခန့် ဆိုလျှင် မည်မျှနည်း။ ထိုပမာဏ အတွက် လက်တစ်ဆုပ်စာ ဆယ်လီလူနည်းစုကသာ တာဝန်ယူ ပေးဆောင်ရလျှင် ခက်ရချေရဲ့ ။ ဆယ်လီတွေထဲက တစ်ဦးက မကျေမနပ်နှင့် ထပြောတော့၏။
"ဒါ မတရားဘူး….သိကြားမင်း နဲ့ ပြောမယ် "
ထိုအခါ နတ်သားကြီး က
"သိကြားမင်း အခု ၄ ဦးဆိုင် အစည်းအဝေး ထိုင်နေတယ်…မအားသေးဘူး….တော်ကြာ လာမယ် "
( လေသံက မာလိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း )
" ၄ ဦးဆိုင် ဆိုတော့ ဘယ်သူတွေ နဲ့ လဲ "
" သိကြားမင်း ၊ MPT ၊ Telenor ၊ Oredoo "
" ၄ဦး ဆိုင်ဆိုတာ တသီးပုဂ္ဂလ ဆန်လွန်းတယ်……ငါတို့ က ၁၂ ဦး ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ ပဲ လက်ခံနိုင်မယ်”
ထိုအခါ…… ပြောရေးဆိုခွင့် နတ်သားကြီး က မှင်သေသေဖြင့်
" ရတယ်လေ……ဟေ့…အားတဲ့ ကောင်လေး ၈ ယောက်လောက် အထဲဝင်ထိုင် ပေးနေလိုက်ကြစမ်း "
ထိုအခါ တာဝန် အနီပတ် နတ်သား ၈ ယောက် က ဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ အလျှင်အမြန်ပြေးဝင်သွား၏။ ဆယ်လီတွေထဲမှ ထအော်သည်။
" ကျုပ်ပြောတာ … ပြည်သူ ၊ ဆယ်လီ ၊ ပရိတ်သတ် ၊ စာနယ်ဇင်းတွေထဲက ထပ်ထည့်ပေးဖို့ပြောတာဗျ…ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်လူတွေကြီးနဲ့ပဲ ပင်းပြီး ကြိတ်ဆွေးနွေးလို့ရမလား "
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နတ်သားကြီးက ဖြုံတောင် မဖြုံ….မျက်နှာတောင် မော့လိုက်သေး။ စာနယ်ဇင်းသမားများဖက် ဟန်ပါပါ လှည့်ကာ
" အခုဆိုရင် သိကြားမင်းကြီးက ၁၂ ဦးဆိုင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးပွဲကြီး လုပ်နေပါပြီ……၄ ဦးဆိုင် မဟုတ်တော့ဘူးနော်…သတင်းမှာ ပြင်ရေးပေးပါ ….သူငယ်တို့ .."
ကဲ….အကျွန်ုပ် ဘာများတတ်နိုင်အံ့…. သိကြားမင်း ထွက်အလာ စောင့်ရုံသာ ရှိတော့သည်။
သိကြားမင်း ထွက်လာလေပြီ။ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ မှ လူများခပ်ကုပ်ကုပ် နှင့် အလျှင်စလို ပြန်သွားကြသည်။ သိကြားမင်း က သက်ပြင်းရှည်ကြီး ချရင်း
"ဆွေးနွေးပွဲ ရဲ့ရလဒ် ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး ဆောင်ရမဲ့ အခွန်ပမာဏ ကို FB ဆယ်လီများက ၇၀% အထိ တာဝန်ယူ ဆောင်ပေးစေ "
ဆယ်လီတွေ ဒေါပွကုန်ကြလေပြီ။ စောဒက တက်၏။ သို့သော်….သိကြားမင်း က သဘောထား မပြောင်း။
"မင်းတို့ပုံတွေတင်လို့အများက ငွေကုန်ခံ ၀န်းရံပေးရတာ…မင်းတို့ တာဝန် ရှိသပေ့ါကွယ် "
ထိုအချိန်နတ်သမီးထဲမှ တစ်ဦး ထလာ၏။
"ကျွန်မ က သုဇိတာ ပါ…မောင် "
FB ပရိတ်သတ် ၀ါးခနဲ ပွဲကျသွား၏။
"မောင့် ကိုအမြဲ အကြံကောင်းတွေပေးလာတာပါ … ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲ ဒီလောက် နဲ့ရပ်သင့်ပါပြီ …မောင် "
သုဇိတာ က FB ဆယ်လီမမတွေကို ခပ်တင်းတင်း ဝေ့၀ဲကြည့်သည်။ သိကြားမင်း က FB ဆယ်လီ အမျိုးကောင်းသားများကို ခပ်စိမ်းစိမ်း တချက်ကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ သိကြားမင်း က
" ဒီနေ့ ဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာပါတယ် "
အိပ်ငိုက်နေသော နတ်သားအချို့ ဘုမသိ ဘမသိ လက်ခုပ်တီး အားပေးလိုက်ကြလေသည်။
အလိုလေ….ဒီလို အဖြေ နှင့် အဆုံးသတ်တော့ ခက်ရချေပေါ့ ။ သို့နှင့် အကျွန်ုပ်က ထပြောမည် ပြင်ရာ ဆယ်လီ Pilot ကြီးက အသာဟန့်လိုက်၏။
" မပြောနဲ့ တော့ ညီမလေးရေ… သိကြားမင်း က အကိုတို့ ကို မနာလို ဖြစ်နေတာ….သူက တဖက် မှာ ရှိလှ နတ်သမီး ၄၀၀/၅၀၀…စုစုပေါင်း မှ ၁၀၀၀ လောက်ပေါ့…အကိုဆို ဘေးမှာ ၀န်းရံနေတဲ့ အချောအလှ နတ်သမီးလေးတွေ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ စဉ်းစားသာကြည့်…သုဇိတာကလည်း ညီမလေး တို့ကို မနာလို ဖြစ်နေတာ…သူကမှ သိကြားမင်း ၁ယောက်တည်းရယ်… ညီမလေး မင်းဆိုရင် စုစုပေါင်း ဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ရှိမလဲ…"
ဒီတော့မှ အကျွန်ုပ် တွက်မိ၏။
အင်း…နတ်သား…အဲ…လူသား…ပရိတ်သတ်တွေက တဖက်တချက်စီမှာ ထောင်ကျော်စီ ရံလို့ ……။ အို….သူတို့ အားလုံးအား အကျွန်ုပ် နိုင်နင်းပါမည်လော?? ဆိုလိုသည်က ၀န်းရံသူ အားလုံး စိတ်ချမ်း သာအောင် ပြန်စာရေးဖို့အကျွန်ုပ် နိုင်နင်းပါမည်လော?? ဒီကြားထဲ ၀န်းရံသူများ ကောင်းမှုကြောင့် ဆယ်လီတန်းထဲ မျက်စိလည် လမ်းမှားလာသော စာရေးဆရာ ယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင် ကျွန်ုပ်သည် မတရား အခွန်ဆောင်ရချေဦးမည်။
အပြန်ခရီးတွက် အကျွန်ုပ်လည်း စိတ်ပျက်စွာဖြင့် နတ်ဗိမ္မာန်ထိပ်မှ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လေယာဉ် တစ်စီးအား တားရန် စောင့်ရင်း
" FB သုံးမိ အပြစ် ရှိပါတယ်…သိကြားမင်း ရယ်"ဟုသာ ရေရွတ်နေမိရတော့၏။
သို့ကလို ရေရွတ်ရင်း နှင့်ပင်….အကျွန်ုပ် ရွှေရေးထင်ထင် သည် မဟာအိပ်မက်ကြီး မှ လန့်နိုး လာခဲ့ရလေတော့သည်တကား ။ ။
Posted in: သရော်စာ , သဲသဲ , ထွေထွေရာရာ